China Corn Cob Bulb China Manufacturers & Suppliers & Factory
Corn Cob Bulb - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Corn Cob Bulb)
Bbier Led Corn Bulb 100W bụ nke a wuru iji bụrụ bọlbụ zuru ụwa ọnụ ma nwee ike ịchekwa gị ruo pasent 80 nke ọkụ eletriki na-anọchi 300W HPS HID MH .Otu Dimmable Led Corn Bulb bia na 4000k, 5000k, na 5700k kelvin ìhè okpomọkụ, na E39 mogul screw isi. Ihe niile 100 Watt Led Corn Bulb mere site na EC ROHS. Oge ndụ nke C...
Ngwunye anyị 6wụrụ Halogen Bulbs bụ 110LM / W, Day White 5000K na 6w Led Corn Cob Bulb bụ nkwụsị zuru okè maka 18W incandescent bọlbụ. Enwere ike iji 6w Screw in Led Lights na - ejighị ya mee ihe n'ụlọ, ahịa, ụlọ ọrụ, họtel. Ahịa ọka ọka a na-anụ ọkụ n'obi bụ Mercury-n'efu, ọ dịghị flicker na ọ bụghị UV....
E39 30W Biputere Post Top Corn Cob Bulbs
Okpokoro Led Anyị 30W bụ nnukwu ihe na-egbuke egbuke 120lm / w elu watt to lumen, 30% dị ọkụ karị ma jiri ya tụnyere bọmbụ 30W LED. Nke a ọka Bulb 30W na- agbanye 100W na-ekpuchi bọtịnụ mgbe ị na-echekwa ọtụtụ ụgwọ eletrik otu afọ. The Led Corn Cob Bulbs 30w enweghị radieshon, ọ dịghị flicker, Ngwa na na na, ọkụ edo...
Corn Cob Bulb Led Corn Cob Bulb Led Corn Cob Bulbs Corn Cob Light Bulbs Led Cob Bulb Led Corn Cob Light Bulbs Led Corn Bulb Led Corn Cob Bulb ọkụ